‘मपछि अब अर्को कोही कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री नबनोस् भन्ने ओलीको आशय’
तटस्थ भएर हेर्दा नेकपाको बहुमतमा तीन वटा फ्याक्टर मुख्य थिए !
१-ओलीले नाकाबन्दी ताका बोलेर कमाएको छवि
२-बाम-एकताले कम्युनिस्टहरू बीच ल्याएको अद्भुत उत्साह
३-स्थायी र स्थिर सरकार तथा समृद्धिको जनचाहना
बहुमत आएपछि पूरा गर्नुपर्ने म्यान्डेट पनि यिनै थिए !
१-ओलीले भारतलाई रिझाउने र संवैधानिक निकायलाई तर्साउने रणनीति लिएर उपेन्द्र यादवलाई गठबन्धनको हिस्सा माओवादीभन्दा माथि राखेर उपप्रधानमन्त्री बनाए ! उपेन्द्र यादव घोषित रूपमैं नाकाबन्दीका मुख्य नाइके थिए । जनमतको यो ठूलो अपमान थियो । कुनै औचित्य र प्रसङ्गबिनै मोदीको नागरिक अभिनन्दन गर्न कुर्तासुरवाल लगाएर जनकपुर झरे ।
२-बाम-एकताको स्पिरिट अनुसार काम गरेको भए शायद उपेन्द्र यादव होइन, पूर्व माओवादी पक्षबाट कोही उपप्रधानमन्त्री हुन्थ्यो । आलोपालो प्रधानमन्त्री पनि मानेनन्, अर्को पक्षलाई समान हैसियतको अध्यक्ष मान्न पनि तयार भएनन् । बहुमत ओलीको निजी हो भन्ने भाष्य स्थापनाको प्रयास भयो । अरू छोड़म्, गत भदौको विवादपछि एकलौटी गर्न छोडेर नक्कली सुकुम्बासीको ठाउँमा नेपाल गुटको कसैलाई अर्थमन्त्री बनाएको भए पनि यो विग्रह रोकिने थियो ।
३-संविधान लेख्दै गर्दा स्थिरताका लागि टुट-फुट, षड्यन्त्र र अनावश्यक चुनाब रोक्न तीन वटा व्यवस्था गरिएका थिए;
-केही नेता र सांसदको सनकमा पार्टी फुटाउन नसकियोस् र विदेशी शक्तिले पार्टी नै फुटाएर चलखेल गर्न नसकून् भनेर संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी दुबैमा चालीस प्रतिशत पुऱ्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था,
-यसअघि झैँ अविश्वास प्रस्तावले ६ महिनामैं ढाल्ने कमजोर सरकार नहोस् र संसदमा अविश्वास प्रस्ताव नै ल्याउन नपाइने निरङ्कुश सरकार पनि नहोस् भनेर कम्तिमा दुई वर्ष अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था, र,
-यसअघि प्रधानमन्त्रीले विशेषाधिकारको नाममा सार्वभौम संसदलाई नै मनचाहे भङ्ग गर्न सक्ने अवस्था रहेकोमा बहुमतले बनेको सरकारले संसद भङ्ग गर्न नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था ।
ओलीले स्थायित्वको यही प्रावधानमाथि प्रहार गरे । पहिलो पार्टी फुटाउने अध्यादेश ल्याएर । दोस्रो आफ्नै दलको स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै मबाहेक अर्कोलाई हुन दिन्न भन्ने ईगो र अहं देखाएर संसद नै भङ्ग गरिदिएर । अहिले भारत र चीनको सतहमैं देखिने गरी भइरहेको चलखेल त सबैले देखेकै कुरो भयो । अब प्रधानमन्त्रीले चाहेको बेला संसद भङ्ग गर्न सक्ने नजिर फेरि बस्यो भने स्थायित्वको टन्टो सधैँलाई सकियो !
गहिरो गरी हेर्दा मपछि अब अर्को कोही कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री नबनोस् भन्ने उनको आशय देखिन्छ । नत्र स्पष्ट कम्युनिस्ट बहुमत भएको संसद गैरसंवैधानिक ढङ्गले भङ्ग गर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन । जो बन्थ्यो, पार्टीकै बन्थ्यो । संसदले उनैलाई समर्थन गर्न पनि सक्थ्यो ।
बाहिरबाट हेर्दा यस्तो देखिन्छ । भित्रबाट हेर्दा आफ्नो कोठाको रङ्ग अनुसार फरक-फरक देखिएला !
सबै नागरिकलाई कोभिडविरुद्धको खोप निःशुल्कः प्रधानमन्त्री
संक्रमण नियन्त्रण बाहिर जान नदिन जापानमा पिसीआर परीक्षणको दायरा बृहत् गर्ने
संसद विघटनको विरोधमा नेपाली कांग्रेसद्वारा आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा
‘भ्याक्सिनबारे फेसबुकमा दुई/चार पोस्ट पढेकै भरमा नकारात्मकता फैलाउनु जरूरी छैन’
के टू आरोहण गरेर फर्केका कीर्तिमानी आरोहीलाई सरकारले गर्यो सम्मान
प्रतिगमनविरुद्धको आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने प्रचण्डको उद्घोष
माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता सम्भव छैन : वैद्य
प्रधानीमन्त्री ओलीसँग भेटेर फर्किए भारतीय सत्तारुढ दलका नेता स्वामी
डा. केसीका प्रतिनिधि र सरकारबीचको वार्ता निष्कर्षबिहीन
बाग्लुङ समाज जापानले नयाँ बर्षको शुभकामना तथा साँस्कृतिक कार्यक्रम